XOG MUHIIM AH:Maxaad kala socotaa halka uu salka ku hayo Dagaalka Xaaf iyo kheyre? | jubbaland news
XOG MUHIIM AH:Maxaad kala socotaa halka uu salka ku hayo Dagaalka Xaaf iyo kheyre?
Xog muhiim ah oo aan ka helnay Siyaasiyiin iyo Aqoonyahano u dhuun-daloola arrimaha Shidaalka Soomaaliya ayaa sheegaysa in Qilaafka Siyaasadeed ee u dhaxeeyaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweyne Xaaf uu bilowday kadib markii Axmed Ducaale Xaaf Madaxweynaha Galmudug uu Heshiis Badrool Baaris ah u saxiixay Shirkadda Badroolka ee lagu magacaabo Liberty oo dalka Mareykanka laga leeyahay.
Heshiiskan uu saxiixay Madaxweyne Xaaf ayaa ah mid ogolaanaayo in Galmudug gaar ahaan Xeebaha ay Shidaal ka baari karto shirkadda Liberty.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo howsha ugu weyn ee uu xafiiska u fadhiyo tahay, ilaalinta danaha Shirkadaha Badroolka ee yurub gaar ahaan (SOMEOIL) oo Ingiriiska laga leeyahay iyo (SATEOIL) oo laga leeyahay Norway ayaa aad uga carooday tillaabada uu ku dhaqaaqay Madaxweyne Xaaf.
Heshiiskan uu ka carooday Ra’isulwasaare kheyre ayaa waxaa ka dambeeyay oo soo dhameeyay Nin ay Ra’isulwasaaraha Qaraabo dhow yihiin, haddana ah Maareeyaha Batroolka Galmudug, Waxaa sidoo kale Xaaladda sii murjiyay Ninkan Qaraabada la ah kheyre oo xafiiltan adag horay u dhexmaray isaga iyo kheyre.
Ra’isulwasaare Xassan Cali kheyre oo mihiimaddiisa kowaad ay tahay ilaalinta danaha yurubiyaanka ee Soomaaliya, ayaa haddana wuxuu share ku leeyahay labadan shirkadood ee kala ah (SOME OIL) (SATE OIL), Mr kheyre ayaa markuu noqday Ra’isulwasaaraha Dalka, Wakiil ka dhigtay Ninka ay Walaalaha yihiin ee lagu magaaco Gaambe.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa suuqa gashtay inuu share kiisa kala baxay Shirkadaha shidaalka ee yurub, lkn warkaas ayaa ah mid ka fog Xaqiiqda Waxaana booskiisi hadda ka shaqeeya Ninka ay walaalaha yihiin laguna xanto Milkiilaha Xukuumadda Soomaaliya isla markaana ah Maamulaha Hotel Jazira mr Gaambe.